Wednesday March 08, 2017 - 16:53:27 in Wararka by Super Admin
Qoraal uu ku qoray Boggiisa Twitterka ayaa Donald Trump waxa uu ku yiri : "122 ka mid ah raggii Obama uu kasii daayay Xabsiga Guantanamo waxay ku laabteen Saaxaatka dagaalka", isagoona sheegay in tallaabtii uu Maamulka Obama uu ku doonayay inuu ku xiro xabsigaasi inay aheyd mid khalad ah.
Madaxweynihii hore ee Wadanka Mareykanka Barack Obama ayaa waxyaabihii uu doorashada kusoo galay intii uu tar tarmayay xilka madaxtinimada ayaa waxaa ka mid ahaa inuu si buuxda u xiri doono Xabsiga Guantanamo, hase yeeshee Sideed sano oo Xafiiska uu joogay kuma guuleysan inuu albaabada u laabo Xabsigaasi, inkastoo uu kasii daayay inkabadan 100 Maxaabiis ah oo halkaasi ku xirnaa.
Donald Turmp oo sii hadlayay ayaa waxa uu yiri : "Dadka Jeelkaasi ku xiran waa kuwo khatar ah, mana aha in loo ogolaado inay dib ugu noqdaan furimaha dagaalka".
Agaasimaha Hey'adda Sirdoonka Qaranka ee dalka Mareykanka ayaa warbixin uu soo saaray bishii September ee sannadkii hore waxa uu ku sheegay in 122 ka mid ah 693 Maxbuus oo sanadihii lasoo dhaafay laga sii dayay Xabsiga Guantanamo Bay inay dib ugu noqdeen Saaxaatka Jihaadka, gaar ahaan Waddamada Yemen iyo Suuriya.
Xabsiga Guantamo Bay ayaa waxaa la furay sanadkii 2002-kii dhowr bilood kadib markii Dowladda Mareykanka iyo isbaheysiga reer galbeedka ay duullaan gardarra ah ku qaadeen dalka Afghanistan, waxaana halkaas lagu xiray Boqollaal Muslimiin ah, kuwaas oo la kulmay falal tacbiidin wuxuushnimo ah.